सप्तरीमा प्रिन्सिपलले गरेको अनैतिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि..??? छात्राले लगाए यस्तो आरोप – Sanghiya Online
सप्तरीमा प्रिन्सिपलले गरेको अनैतिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि..??? छात्राले लगाए यस्तो आरोप
राजविराज, १२ मंसिर । सप्तरीको राजविराज स्थित दुर्गा सेकेण्ड्री स्कुलका प्रिन्सिपल चन्द्रशेखर देवबाटै एक छात्रा पीडित भएकी छिन् ।
प्रिन्सिपल देवले गरेको अनैतिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेका कारण एसईई परीक्षाको फारम भर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको कक्षा १० मा अध्ययनरत एक छात्राले आरोप लगाएकी हुन् । विजयादशमीको विदाको बेला आफूलाई विद्यालय बोलाएर कक्षा ९ को फारम भर्न भनेपछि आफुले तत्कालिन प्रिन्सिपल स्व. कुमार पाठक हुँदा नै फारम भरिसकेको भन्दै नमानेको उनले बताईन् । ‘कक्षा ९ मै भरिसकेको फारम फेरी किन भर्ने, मैले भनेपछि प्रिन्सिपल सरले तिमी मेरो कुरा मान, २०७५ सालको एसईई परीक्षा पास गराईदिन्छु’ पीडित छात्राले भनिन् ‘सरको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ‘तिमीलाई अब कक्षा ९ मै बसाउँछु’ भन्दै रजिष्ट्रेशन फारम च्यातिदियो ।’
आगामी एसईई परीक्षामा समावेश हुन पाउँ भनी पटक–पटक प्रिन्सिपल देवलाई आग्रह गर्दा उल्टै अनावश्यक शब्दहरु प्रयोग गर्दै धम्क्याउने गरेको छात्राले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बताईन् । आफुले अनावश्यक कुराहरुबारे प्रहरीमा जानकारी गराउँछु भन्दा वहाँले ‘तिमीलाई जहाँ जानु छ त्यहाँ जाउ, मलाई केही फरक पर्दैन’ भनी जवाफ दिने गरेको उनको आरोप छ । केही दिन अघि मात्र प्रिन्सिपल देवले घरमै आएर समेत अपशब्द प्रयोग गरेको बताईन् ।
आगामी एसईई परीक्षा दिनबाट आफु बञ्चित हुने अवस्था आएको तथा प्रिन्सिपल देवको दवाब खप्न नसकेर अभिभावकको सहयोगमा न्यायकालागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेको उनले जानकारी दिईन् । सोमवार जिल्ला प्रहरीमा आफु अन्यायमा परेकोबारे जानकारी गराउँदा तत्कालै प्रहरीले प्रिन्सिपलसहित सरहरुलाई बोलाएर घटनाबारे बुझ्ने काम गरेको छात्राले बताईन् । दुवैपक्ष बिच शर्त सहित आपसी सहमती भएपछि पनि मङ्गलवार विद्यालय जाँदा प्रिन्सिपल सरले साथीहरुका अगाडि ‘यसको आमाबुवा पनि छैन, व्यवहार ठिक छैन’ जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेपछि फेरी अभिभावकको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकी हुँ ।’
मङ्गलवारै दुवै पक्षबीच छलफल हुँदा उक्त विषयमा वास्तविकता निक्र्यौल गर्न बृहत छलफलमा बस्ने भनी प्रतिवद्धता जनाउँदै उनीहरु गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले जानकारी दिएका छन् । उक्त विषयमा आफुहरुले समेत अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै दोषी पाईए कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
यता विद्यालयकै छात्राले आफुमाथि लगाएको आरोप गलत रहेको प्रिन्सिपल देवले बताएका छन् । विद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने अत्यधिक शुल्क समेत बाँकी रहेको बताउँदै अनुशासन विपरित गतिविधिहरु देखिएकोले निगरानी गर्न खोज्दा आफुमाथि यस्तो अनावश्यक एवम् प्रायोजित आरोप लगाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भेटिएका प्रिन्सिपल देवको दावी छ ।
विद्यालयमा तोडफोडको प्रयास
सोही विषयलाई लिएर छात्राका परिवारजन एवम् शुभचिन्तकहरुले विद्यालयमा ढुङ्गामुढा गरेका छन् । आक्रोशित समूह अत्यधिक उत्तेजित हुन थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीको सहयोगमा स्थिति साम्य भएको थियो ।
विद्यालयमा आक्रोशित समूहले नाराबाजी सहित ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि शिक्षक चन्दना विश्वास बेहोस समेत भएका थिए । उनलाई उपचारकालागि तत्कालै स्थानीय अस्पताल लगिएको जनाईएको छ ।
समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालको बैठक सम्पन्न, “मे डे” भव्य रुपमा मनाइने
जनकपुरमा प्रहरीको भ्यानसंग मोटरसाईकल जुध्दा १ युवकको मृत्यु १ जना घाइते
अनिल झाकोलाई पूर्व सांसद तथा बागि उम्मेदवार बबन सिंहले कडा चुनौती दिदै
रौतहट क्षेत्र नं.१ का मतदाताहरु भन्छ राजपा फोरम पुरौ पाईनल नै विजय हुने सुनिश्चित